प्रशासनबाट छुटेपछि सम्बन्धनको माग गर्दै दुर्गा प्रसाईंले दिएको निवेदन दर्ता
By radiovision on	 February 13, 2020 BREAKING NEWS, ताजा खबर, फोटो, स्थानीय खबर
विर्तामोड, १ फागुन ।
झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएण्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिनु भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा हाजिर भएर साधारण तारेखमा छुटे लगत्तै उहाँले आज आयोगमा निवेदन दिनु भएको हो । यसअघि आयोगले निवदेन लिन अस्वीकार गरेको प्रसाईंको दाबी थियो ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले निवेदन दर्ता भइसकेको बताउनुभयो । ‘पहिले नियमसंगत रुपले आएको थिएन । अहिले दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । आयोगले छिट्टै निर्णय लिन्छ ।’
तर, प्रसाईंले भने पहिले जुन निवेदन लिन मानिएको थिएन, अहिले त्यही दर्ता भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म १५ भदौमा त्यही निवेदन लिएर जाँदा दर्ता भएन । अहिले डा. गिरी आफैंले ३७० नम्वर मा दर्ता गर्नुभयो ।’
प्रसाईंले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्बन्धनका लागि गिरीले २० करोड रुपैयाँ घुस मागेको दाबी सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । लगत्तै गिरीले धम्की र गाली बेइज्यतीको कसुरमा प्रशासनमा उजुरी दिनु भएको थियो । ००००००